“Haddii uu kooxda sii joogo, ma ciyaari doono” – Xavi Hernandez oo go’aan cad ka istaagay xaaladda Ousmane Dembele – Gool FM
Ahmed Nur January 27, 2022
(Barcelona) 27 Jan 2022. Kulan gaar ah oo u dhexeeyay wakiilka Ousmane Dembele ee Moussa Sissoko iyo tababaraha naadiga Barcelona ee Xavi Hernandez kaasoo looga hadlayay mustaqbalka xiddiga garabka ka ciyaara ayaa qabsoomay Talaadadii oo ay taariikhdu ahayd 25-kii bishan.
Kani waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyay ee Xavi iyo Sissoko si toos ah u dhex mara waxaana wakiilka Dembele uu doonayay inuu ogaado go’aanka macallinka Barca kaga aaddan mustaqbalka xiddiga Faransiiska ah xilli suuqa bisha January ee galay maalmihii ugu dambeeyay.
Sida aan kasoo xigannay wargeyska MARCA, 42-sano jirka ka arrimiya qolka lebiska ee garoonka Camp Nou ayaa taageeray go’aanka Barca ee ah inuu Dembele heshiis cusub saxiixo ama uu haatan koox raadsado, Xavi ayaana intaas sii raaciyay inuusan 24-sano jirka weerarka ka ciyaara uusan garoonka lugta gelin doonin haddii uu labadaas doorasho midkood qaadan waayo.
“Haddii uusan aqbalin mid ka mid ah labada doorasho, markale uma ciyaari doono Barcelona” ayuu Xavi ku yiri wakiilka laacibkii hore ee Borussia Dortmund, waxayna taasi ceel dheer kusii ridday inay labada dhinac ku heshiiyaan qandaraas kordhin.
Neymar oo dib u bilaabay soo kabashadiisa wajiga gudaha garoonka... (Miyuu taam u noqon karaa kulanka Real Madrid?)